Idphoto4you inoderedza saizi yemifananidzo yePasipoti online | Gadget nhau
Idphoto4you inoderedza saizi yemifananidzo yePasipoti online
Pasina kushandisa mari, unogona kurima mapasipoti-saizi mapikicha nenyika uye zvinyorwa zvemifananidzo apo pikicha iri kugadziriswa. Iwe unogona zvakare kurima iwo mufananidzo mupasipoti-saizi pikicha yevisa kana chero imwe nzira uye pirinda mapasipoti-saizi mapikicha kumba. Zvese izvi nekuda kwekugadzirwa kwepasipoti-saizi mapikicha online ne IDphoto4You.com iyo inobatsira basa revazhinji.
idphoto4iwe, iri nyore pamhepo webhu kunyorera iyo inokutendera iwe kuti ugadzire mapasipoti mapikicha neiyo chaiyo saizi muganho uye online pasina kushandisa mari. Zvese zvaunoda kamera yedhijitari, iwe unotora iyo pikicha, woiisa uye wobva watevera nhanho dzeIdphoto4you sevhisi kuti uwane iyo yepasipoti-yerudzi mufananidzo.
1 Maitiro ekutora mapasipoti saizi mapikicha kubva kudhijitari kamera
2 Saizi yemapasipoti saizi muSpain
3 Mufananidzo weiyo DNI uye pasipoti zvakafanana here?
4 Pasipoti pikicha inoda muSpain
5 Maitiro ekushandura foto kuenda pasipoti saizi pamhepo (unogona kutaura nezvemaapps kana mawebhusaiti)
Maitiro ekutora mapasipoti saizi mapikicha kubva kudhijitari kamera
Heano zano rakareruka, iwe unofanirwa kuve nechena kumashure uye siya nzvimbo yakakwana kutenderedza musoro kuti utore mufananidzo. Uyezve ita shuwa kuti hauna mimvuri kumeso kwako kana kumashure, zvakare shandisa kamera pakureba kwakaenzana nemusoro wako.
Usarega kurodha pasi ichi chishandiso chinokubatsira iwe kuve nerondedzero mufananidzo wako wepasipoti, nehukuru chaihwo hweichi chiitiko chepamutemo.
Saizi yemapasipoti saizi muSpain
Iwo mafoto epasipoti muSpain anogara achifanira kuzadzisa akateedzana ezvido, izvo zvatichataura nezvazvo pazasi. Kunyange chimwe chezvakanyanya kukosha kukura kweiyo pikicha. Sezvo ungangove uchitoziva, patinoenda kunzvimbo yekutora mifananidzo, angave muchina kana mutori wemifananidzo, zvinofanirwa kudomwa nguva dzese kuti aya mafoto ndeepasipoti. Sezvo vane saizi chaiyo.
Panyaya yeSpain, sekuratidzwa nehurumende pachayo, saizi yemifananidzo iyi inofanira kunge iri pakati pe35 ne40mm yakafara uye yakaenzana kumusoro, ndokuti, pakati pe40 kusvika 53 mm kukwirira. Hazvigamuchirwe chero nguva kuti mafoto acho ari madiki pane aya. Mukuwedzera, mavari, musoro uye chikamu chepamusoro chemuviri chinofanira kugara pakati pe70 ne80% yemufananidzo.
Mufananidzo weiyo DNI uye pasipoti zvakafanana here?
Muzviitiko zvakawanda, kune vanhu vano ivo vakashandisa zvakafanana mapikicha muzvinyorwa zviviri. Iwe unogona kunge uine iwo iwo iwo mufananidzo mune yako ID uye mune yako pasipoti, saka mune musimboti zvinogoneka. Ichokwadi ndechekuti zvinoenderana zvakanyanya pachiitiko chega chega, nekuti kana uchimutsiridza iyo DNI, pikicha nyowani inogara ichikumbirwa, iyo yakasiyana neye yapfuura. Kana iwe ukavandudza iyo DNI uye uye uchizo kunatsiridza pasipoti, zvingangoita kuti ivo vachakubvumidza iwe kushandisa pikicha yeiyo DNI. Asi hachisi chinhu chinoitika mune zvese zviitiko.
Muchiitiko chemifananidzo yeID, zvinowanzo simbiswa kuti saizi iyo inofanirwa kunge iri makumi matatu nemaviri nemakumi maviri nematanhatu. Izvi ndizvo zvinoratidzwa pawebhusaiti yepamutemo yebazi. Ndokusaka vachiwanzo gara vari vadiki pane vepasipoti. Asi pane nguva apo nemufananidzo watakashandisa kune iyo DNI ivo vanotibvumidza isu kuvandudza pasipoti.
Pasipoti pikicha inoda muSpain
Sezvatambotaura kare, iyo pasipoti pikicha inowanzo kuve nezvimwe zvinodiwa mune Spain. Kana izvi zvisati zvaitika, pikicha yacho haizoshandike uye haigashirwe. Izvi ndizvo zvakakosha, asi zvakakosha kuteedzera mune chero zvazvingaitika, kudzivirira matambudziko neakataurwa pikicha. Chii chaunofanirwa kuzadzisa?
Recent Photo: Haikwanise kuve inopfuura mwedzi mitanhatu yekuberekwa
Musoro uye chikamu chepamusoro chemuviri chinofanira kugara pakati pe70 ne80% yemufananidzo
Iko kumashure kunofanirwa kuve kuchena uye yunifomu
Mufananidzo wacho unofanirwa kunge uri muvara uye wakadzika
Inofanira kudhindwa pabepa remhando yemifananidzo
Munhu wacho anofanira kusiya akatarisa akananga kukamera
Maziso anofanira kuvhurika uye kana magirazi achishandiswa anofanirwa kugadzirwa negirazi rakajeka
Mifananidzo ine ngowani, chivharo, sikafu kana visor hazvigamuchirwe
Panyaya yekupfeka chifukidziro, unofanirwa kuona chiso chako zvakajeka chero zvodii
Kune mapikicha evacheche anofanirwa kubatwa pamusoro, hapana maoko anoonekwa akabata musoro
Maitiro ekushandura foto kuenda pasipoti saizi pamhepo (unogona kutaura nezvemaapps kana mawebhusaiti)
Kana uchitova nemufananidzo, asi hausi mune fomati inodiwa, tinogona kubheja pakuushandura. Saka izvo zvatove nazvo mufananidzo unoenderana nezvavanotibvunza mupasipoti. Kune izvi, tinogona kushandisa mapeji ewebhu kana kunyorera, izvo zvinotibatsira kushandura saizi. Pane zvakawanda zvingasarudzwa, sezvo kunyangwe kushandiswa kwemidziyo senge Paint kunogona kubatsira, kana isu tatoziva zviyero zvekushandisa mune akadaro pikicha.
Imwe yesarudzo dzakazara ndeye Visafoto, kuti iwe unogona kushanyira mune iyi link. Pawebhusaiti ino zvinokwanisika kugadzira mapikicha emapasipoti, ID kana mavhiza enyika zhinji. Saka zvinowirirana zviri nyore kune zvese zvatiri kutsvaga mupfungwa iyoyo. Isu tinongofanirwa kuisa pikicha, iyo inogona kutombove neshure. Kutenda kune ino webhusaiti isu tinokwanisa kushandura iyo pikicha kuita yakakwana pasipoti foto.
Kana izvo zvawanga uchitsvaga yaive app yeApple, pane zvimwe zvingasarudzwa zviripo. Tine Anwendung inonzi Pasipoti ID Photo Mhariri, nayo yekugadzira mafoto eiyo ID kana pasipoti nenzira yakapusa. Iyo app iri nyore kushandisa, iwe unongofanirwa kuisa pikicha uye kuigadzirisa. Unogona kuirodha mahara pa Android pazasi:
Pasipoti uye vhiza ID yemufananidzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Idphoto4you inoderedza saizi yemifananidzo yePasipoti online
Nathan Saavedra akadaro
Ndatenda nechinyorwa. Ini ndanga ndichitsvaga kwekutora mafoto mumagwaro panguva yekufamba nharaunda. Nezano rake, akashandisa vhiza Visa. Kubva ikozvino zvichienda mberi, ini ndichagara ndichitora aya mafoto online chete, zviri nyore kwazvo!
Pindura Natán Saavedra
Joan Monrabá (Colt) anotaura nezve ramangwana rekubatanidza bhizinesi kuConnecting Media
Google inoburitsa zvese zviri pamutemo nezve Stadia